Komisheni Iri Kuongorora Kuurayiwa kweVanhu neMauto muHarare Yoenderera Mberi Ichinzwa Humbowo
Komisheni iri kuongororo kuurayiwa kwevanhu nemauto mumhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo dzegore rino, iri kuendererera mberi nekunzwa humbowo kubva kune veruzhinji, vakawanda vachiroverera MDC Alliance pamuchinjikwa.
Vazhinji vevanhu vanodarika gumi nevasere vakapa humbowo kubva neChipiri kusvika musi weChitatu vakaudza komisheni iyi kuti vanoshanda kumahofisi ebato riri kutonga reZanu PF uye vari kuroverera MDC Alliance mhosva vachiti ndiyo inenge yakakonzeresa mhirizhonga yakaitaika musi wa1 Nyamavhuvhu.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weMedia Centre, VaEnerst Mudzengi, vaudza Studio 7 kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kukonzera izvi zvakaita sekuti vanhu vari kuenda kunopa humbowo ndivo vega vakanzwa nezvekomisheni iyi.
VaMudzengi vati zvakakosha kuti vese vane zvavakaona vaenda kunopa humbowo kukomisheni iyi vachiti komisheni iyi haifaniri kuonekwa nemumaziso emapato ezvematongerwo enyika.
Mukuru wePlatform for Youth Development, VaClaris Madhuku, vanoti havasi kufara nehuwandu hwevanhu vari kuenda kukomisheni iyi kana zvichenderana nekushambadzwa kwakaitwa komisheni iyi.
Vanoti vanoona sekuti vakawanda vari kutya kunopa humbowo vachifungidzira kuti vanongona kuzoshungurudzwa kana vachinge vaita izvi.
Zvichakadai, vamwe vagari vemuHarare vaudza Studio7 kuti vanodawo kuona masoja nemapurisa achipawo humbowo pachena sezviri kuita veruzhinji.
Mumwe wechidiki ati anonzi Tecla audza Studio 7 kuti angafara chose kana masoja nemapurisa akapa humbowo pachena.
Mumwewo mugari asina kuda kudomwa nezita ati kana izvi zvikaitika veruzhinji vangatambire nemufaro zvichabuda muongororo iyi.
VaMadhuku vaudza Studio 7 kuti hapana chingatadzise komisheni iyi kukoka masoja nemapurisa kuti azope humbowo pachena sezvo iiine simba rekuita izvi.
Mumwe mushandi wekomisheni iyi asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio7 kuti masoja nemapurisa achabvunzurudzwa pachena kunze kwekuti apa zvikonzero zvakakosha zvinoenderana nekuchegetedzwa kwenyika kana kuti national security pachirungu.
Komisheni iyi iri kuenderera mberi ichinzwa humbowo mangwana uye inoti izvi zvicharamba zvichiitika kudzamara vese vanoda kupa humbowo vawana mukana.
Zimbabwe Yodzingwa Mumakwikwi eAFCON